Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo shir uga furmi doono - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo shir uga furmi doono
September 3, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cumar Camay iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo ka qeybgalayay munaasabada furitaanka ciidamada isku dhafka ah bishuu July. [Xigashada Sawirka: Raxanreeb]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa la filayaa in shir uu uga furmo gudaha magaalada Gaalkacyo kaasoo ujeedkiisu yahay xasilinta gobolka Mudug, sida ay sheegeen ilo-wareedyo xog-ogaal ah.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cumar Camay iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa tagay magaalada Gaalkacyo si ay uga qeybgalaaan shirka.
Labada dhinac ayaa dhawaan sameeyay ciidan booliis ah wadajir ah kuwaasoo ka howlgalaya gudaha magaalada Gaalkacyo si ay uga hortagaan falalka amni darada ah.
Deegaanada miyiga ee gobolka Mudug ayaan dhawaan waxaa ka dhacay dhacdooyin dhiig ku daatay oo u dhaxeeya dad kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug.
Madaxweyne Deni oo safarkiisii ugu horeeyay ee dalka dibadiisa ah ku tegi doona Imaaraatka Carabta
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa safarkiisii ugu horeeyay ee dalka dibadiisa ah geli doona asbuuca soo socda. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safarkiisa ugu horeeya ee dalka dibadiisa ah ku tagi doona dalka Isutaga Imaaraatka [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha ay muhiim u yihiin horumarka dalka. Wareysi uu siiyay idaacada Radio Daljir Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ay ku xiranyihiin horumarka [...]